Mogadishu Journal » Shirka maalgashiga Puntland oo Garoowe ka soconaya
Shirka maalgashiga Puntland oo Garoowe ka soconaya
Mjournal :-Madaxweynaha Maamul Goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta magaalada Garoowe si rasmi ah uga furay shirka Maalgashiga Puntland oo lagu soo bandhigi doono fursadaha Maal-geshi ee ka jira Puntland.
Shirkan oo socon doono muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa ka qeyb-galaya ganacsato Soomaaliyeed iyo kuwa Ajaanib ah kuwaasoo ka kala yimid dalal ku yaal qaarada Afrika, wadamada Carabta, Shiinaha iyo dalal kale kuwaasi oo mudada shirku socdo loo bandhigi doono fursadaha maal-geshi iyo kuwa ganacsi ee ka bannaan gudaha Puntland.
Qudbad uu ka jeediyay furitaanka shirka ayuu Madaxweyne Deni ugu baaqay ka qeybgalayaasha inay maalgashadaan Soomaaliya gaar ahaan Puntland.
”Dowladda Puntland waxay dejisay siyaasad maalgashi oo kuu saamaxeysa inaad maalgashi ku sameysid Puntland qayb walba iyo meelkasta oo aad daneynaysid” ayuu yiri madaxweyne Deni.
Madaxweynaha Puntland SIciid Deni ayaa kormeeray qaybta bandhigga Ganacsatada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Puntland oo ay kusoo bandhigeen Ganacsigooda iyo wax-soosaarkooda, waxaana ay ku bogaadiyeen dadaalkooda ganacsi iyo kasoo qaybgalkooda shirka.
Dab ka kacay diyaarad ka duushay Muqdisho oo gaartay Nairobi
Ciyaaryahan sheegay in uu qabo Cudurka HIV